Cixi Fujing Plastic Products Factory rakaumbwa muna 1990, imwe nyanzvi mugadziri mu R & D, inobereka kumusika-siyana mudzanga filters. Zvino isu takaita mukuru nokutengesa epurasitiki mudzanga filters zvakatendeka aivigirwa kuJapan, America, Europe, Middle East, Southeast Asia etc. reungano yedu muchiso "güe" ndiro nomukurumbira China.
Fujing riri mu Cixi guta iri nyore chaizvo motokari. Zvinotora maawa asingasviki maviri aéroports matatu (Ningbo, Hangzhou, Shanghai) muna China East.
Fujing chinotarisa pakuponesa vanosvuta 'utano uye upenyu. Isu kuva "Fodya Control Research Centre" muna Shanghai pamwe mumayunivhesiti uye tsvakurudzo Kudya muna 2000.Our filters anogona kubvisa pamusoro 90% chikakananda, tara uye nezvimwe chepfu uye kunokuvadza fuma kubva mudzanga.
Fujing ane dzinotevedzana otomatiki michina kusanganisira kuungana, kufambira, yekuedzwa, kurongedza uye Simbiso. Kugadzirwa yedu otomatiki mwero iri pamusoro 90% izvo zvinoramba zvigadzirwa yedu yakanaka mutengo unongotaura. Fujing ndiko kutanga kuva zviuru gumi kirasi guruva isina wekishopu iri China.
Fujing zvechokwadi anogamuchira wenyu OEM / ODM kana mumwe chinodiwa. Isu tazvigadzira kuti kukupa zvakanakisisa basa uye yepamusoro zvigadzirwa nguva dzose.